Chengetedza Moto TV nezwi (ine Echo, Alexa isina kure kure), Emulator.online ▷ 🥇
Kana isu tine Amazon Echo chishandiso, senge yakanaka Echo Dot, ikozvino zvinogoneka Raira iyo Fire TV Tsvimbo uchishandisa izwi rako, Pasina kudiwa kwekudzora kure. chivi wobva waita kudzvanya izwi rekutonga kiyi pane iyo Moto TV kure kudzora, unogona kufambisa mamenyu nekungotaura, nekuda kwekubatana pakati peMoto TV neEcho. Nesisitimu iyi, haugone kutsvaga episodhi, mafirimu uye nhepfenyuro dzeTV chete, asi zvakare kutanga uye kumisa kutamba, dzokera kumashure wozoona ruzivo rwunokumbirwa nemubatsiri wezwi paTV, senge mamiriro ekunze, karenda kana zvimwe. Iwe unogona zvakare kuona mifananidzo yakatorwa neyekuchengetedza kamera yakabatana ne Alexa paTV uye inopa imwe sarudzo kana iwe usingawani Fire Fire Stick kure kana usingade kusimuka kuti uibate uye kudzora zvese nezwi rako chete.
Icho chete chinodiwa kushandisa Fire TV nezwi ndechekuti yakabatana neAmazon Echo mudziyo Izvi zvinogona kuitwa zvirinyore izvozvi, uchishandisa iyo Alexa app pane Android kana iPhone. Kana iyo yakafanana account yeAmazon yakagadzirirwa paMoto TV uye Echo, kana iyo Alexa app inogoneswa mumoto weTV TV, ingoshandisa iyo Alexa app pafoni yako ku wedzera Moto TV kumidziyo inodzorwa neEcho.
Mune iyo Alexa app, enda kune iyo tebhu Zvimwe, ibva wabata Configurations uye pakupedzisira mukati TV uye vhidhiyo: Pano iwe unogona kudzvanya iyo Fire TV icon yekuwedzera chishandiso kune iyo Alexa kutonga. Otomatiki pairing inogona kuitwa nekuudza Alexa paEcho kutamba bhaisikopo; Ipapo Alexa anozobvunza kana iwe uchida kumisikidza Moto TV izwi kudzora.
Kana izvi zvaitwa, pasina kushandisa nhare kana kure kure, zvinogoneka udza yedu Echo kana Echo Dot chishandiso: Chinhu chakadai "Alexa, ndiratidze mamiriro ekunze"kuti uone mamiriro ekunze paTV skrini, usina kupindura nezwi rako.
Iwo anonyanya kubatsira mirairo ine Alexa kudzora iyo Fire TV zvinotevera:
Alexa Apri Netflix (inogona kushandiswa kune chero chishandiso chakaiswa).
Alexa inowana "zita" (Alexa ichatsvaga bhaisikopo kana kuratidza kubva kune ese akaiswa maapplication, seNetflix kana Prime Vhidhiyo.)
Alexa akaisa zita remuvhi (kutanga kutanga kutamba bhaisikopo iwe rauri kutsvaga).
Alexa inowana comedies (Alexa ichatsvaga emamuvhi mune iyo mhando.)
Alexa tsvaga iwo musoro pane Youtube (kutsvaga chaiko Youtube; yakatarwa kutsvaga hakushandi kune ese maapplication).
Alexa Dzokera Kumba O Enda kumba (kudzokera kukona skrini).
Alexa Sarudza (kusarudza iro bhokisi rakaratidzwa pane Fire TV interface).
Alexa Enda kuruboshwe kana kurudyi (kufambisa sarudzo kuruboshwe kana kurudyi neumwe).
Alexa Swipe kuruboshwe kana kurudyi (kufambisa sarudzo kurudyi kana kuruboshwe zvinhu zvina kuti zvifambe nekukurumidza).
Alexa vai giu o vai su (kukwira nekudzika mukusarudza menyu).
Alexa ona mavhidhiyo angu (kuenda kune yangu Mavhidhiyo chikamu chePrime Vhidhiyo).
Sezvo iwe uchikwanisa kuona ruzivo rwemamiriro ekunze paTV nekubvunza Alexa nezwi rako, unogona zvakare kubvunza:
"Alexa, ndiratidze karenda"
"Alexa, ndiratidze kamera"
"Alexa, ndiratidze izvo zvekuita-zvinyorwa"
"Alexa, ndiratidze traffic muRome"
"Alexa, ndiratidze iyo yekutenga zvinyorwa"
Kune mamwe matipi ekuyedza neMoto TV uye Echo, taona imwe chinyorwa chekuti sei teerera kuTV odhiyo (ine FireTV) paAmazon Echo
MUZUKURU: Chengetedza TV nezwi rako
Kana iwe uchinyatsoda kudzora TV yako nezwi rako, unogona kuzviita nekutenga chishandiso chinogona kushandura Alexa izwi rairo kuita kure kudzora mirairo. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kushandura migero paTV yako uchishandisa izwi rako nekuda kweAmazon Echo. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kutenga chishandiso senge iyi Smart Home Hub yemakumi mairi euros, iyo inokutendera iwe kudzora chero chinhu chine izwi kure kudzora.
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekubatanidza Alexa kune chero TV